Epeepe mpempe akwụkwọ na-eme ka ọkpụkpụ na-adọkpụ China Manufacturer
Nkọwa:Mgbaaka akpọnaka Eletriki na-ewepu Gates,Akụrụaka Eletriki na-eweghasị Gates,Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ọnụ Ụzọ
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ E Si Nweta Eletrik > Epeepe mpempe akwụkwọ na-eme ka ọkpụkpụ na-adọkpụ
Ihe Nlereanya.: HF-JC90
Ọnụ ụzọ eletriki eletrik bụ ụdị ụzọ nke nwere ike ịkwaga ma gbanwee ya kpamkpam site na isi iji ruo n 'ọnụ ụzọ meghere ụzọ ma chịkwaa ntanetịtị na ntọhapụ nke ndị na-eme njem ma ọ bụ ụgbọ ala. Ọnụ ụzọ telescopic bụ nke a na-agụnye akụkụ ahụ, otu ụgbọala na-akwọ ụgbọala, okporo ụzọ slide na usoro nchịkwa. A na-eme ahụ ụlọ ahụ dịka nchara nchara nchara na almọọ aluminom, ọ na-ejikwa ụkpụrụ parallegram eme ihe. A na-ebugharị ụgbọala ahụ site na bọmbụ pụrụ iche, nkịta na irighiri ntutu, ma nwee njigide aka ma ọ bụ ntinye akwụkwọ ntanetị. Ọ nwere ike na-emepe ma na-emechi ma mechie mgbe ejedebe njigide aka. Mepee ma mechie ma mechie mgbe njedebe akwụkwọ ntuziaka. Usoro nchịkwa nwere nchịkwa nchịkwa, bọtịnụ bọtịnụ push, na ihe ndị ọzọ achọrọ. Ejiri ya na ikuku ntanetị.
Ihe: 201 igwe anaghị agba nchara, 304 igwe anaghị agba nchara (nwere ike ahaziri dị ka ihe a chọrọ)
Ụdị ọrụ: na ma ọ bụ na-enweghị usoro
Isi igwe: nwere ike ịgbakwunye ọkụ ọkụ na ngosi
Ọnọdụ nchịkwa: nkwụsịtụ akara ntụgharị, ịgbanwee geomagnetic, mgbagharị aka, ịgbanwee APP
1. Gịnị bụ okwu ịkwụ ụgwọ ahụ?
TT, LC, Ego niile dị.
Anyị na-enye akwụkwọ ikike ọnwa 12 maka ọnụ ụzọ na ngwa niile.
Ihe atụ Plywood, kwesịrị ekwesị maka ibu ụgbọ mmiri ma ọ bụ ibu ụgbọelu, dị ka arịrịọ gị
Mgbaaka akpọnaka Eletriki na-ewepu Gates Akụrụaka Eletriki na-eweghasị Gates Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ọnụ Ụzọ Akpaaka Azụmahịa na-ewepu ego Ọnụ Ụzọ Nweta Eletrọniki Na-ewepu Akpaaka Epeepe na-ewepu Ụlọ Eletriki Garatrị Mgbanyụ ọkụ na-agbanwe agbanwe